သနပ်ခါးမေ: November 2011
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:05 PM ဆံပင်
ဒီတစ်ခေါက်တော့ အပူမသုံး၊ ဆေးမသုံး၊ ဆံသားလည်း မပျက်စီးတဲ့ ဆံပင်ကောက်နည်းလေး ပေးချင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေးမို့ အပျင်းပြေ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ဂြိုဟ်သားတွေ :P
ခေါင်းလျှော်ပြီး မခြောက်တခြောက် ဆံသား၊
သားရေကွင်း ၆ ကွင်း / ၈ ကွင်း
ဆံပင်စ အနေတော်ကို အခုလို ယူပြီး လိမ်ပါတယ်။
လိမ်ရင်းနဲ့ ဆံသားက ကျစ်သွားတဲ့အခါ အခုလို အခွေလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဆံပင်စ ကုန်တဲ့အထိ လိမ်သွားပြီးရင်၊ အထုံးမပြေစေဖို့ သားရေကွင်း အုပ်ပြီး နှစ်ပတ် ပတ်ပါတယ်။
ကောက်သား အသေးလိုချင်ရင် ဆံပင်နည်းနည်းကို အပိုင်းများများခွဲပြီး ထုံးပေးရမှာပါ။ အလိပ်ကြီးကြီးဆိုရင်တော့ ဆံပင်များများ အထုံးနည်းနည်းပေါ့။
ဆံပင် အပြီး ခြောက်တဲ့အထိ စောင့်ပြီး ဖြည်ပါ။
အချိန်မရှိရင် Hair Dryer နဲ့ မှုတ်လို့ရပါတယ်။
( ဖြည်ရင် ကောက်သားမပြေအောင် သားရေကွင်းကို ဆွဲမဖြုတ်ပဲ၊ ထုံးတုန်းကလို လက်လျှိုပြီး ဖြည်ဖို့လိုပါမယ်။ )
အကောက်တွေကို အစု လိုက်မဖြစ်စေဖို့ haircoat နည်းနည်း ဆွတ်ပြီး ဆံပင်အလယ်လောက်ကစပြီး လက်နဲ့လိုက် ထိုးဖွပါ။ ဘီးနဲ့မဖြီးနဲ့နော်။
Judson Tun နဲ့ တူသလိုလို :P
အကောက်ပြေ သွားတဲ့အခါ ...
အဲ .. မကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ -
ကြာကြာမခံတာရယ်၊ ဇက်ကြောတက်တာရယ်ပါ။ စက်နဲ့ကောက်သလောက် မလှပါဘူး။
ဒါပေမယ့် စမ်းကြည့်ရ တန်တယ်ထင်တာပဲ။
ကျွန်မဆံပင်က တထွာတမိုက်မို့လို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်။ ဆံပင်ရှည်ရင် ပိုလှမယ်နော်။
ဒီနည်းလေးကို http://www.lovemaegan.com မှ ရပါတယ်။ အဲဒီ မှာ ပျိုမေတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် fashion style၊ hair tutorials လေးတွေနဲ့ DIY တွေ အများကြီးရှိလို့ ဝင်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြပါလို့။
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:21 PM ကိုရီးယား
ဒီနေ့ ၁၁ရက် ၁၁ လ ဟာ ကိုရီးယားတွေရဲ့ ပယ်ပယ်လိုဒေး (빼빼로 Day) ပါတဲ့။ (ကိုယ်လည်း ပယ်ပယ်လိုနေ့ရှိမှန်း သိတာမကြာသေးပါဘူး :D)
ပယ်ပယ်လို ဒေး ဆိုတာ ကိုရီးယား ချစ်သူစုံတွဲတွေ အတွက်တော့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလို ထူးခြားနေ့လေး တစ်ရက်ပေါ့။ အဲဒီနေ့မှာ ကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူကောင်လေးတွေက ပယ်ပယ်လိုချောင်း ( ချောကလက်အုပ် ဘီစကစ်ချောင်းလေးတွေ ) လက်ဆောင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ သွယ်လျတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပေးကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘာကြီးလဲနော် ???
တချို့ကျ ကံကောင်းအောင် ၁၁ရက် ၁၁ လ ၁၁နာရီ ၁၁ မိနစ် မှာ ၁၁ချောင်းစားရတယ် ပြောကြတာပဲ။ ( (၁၁) မီးလည်း ငြိမ်းစေသတည်းပေါ့) တရုတ်နိုင်ငံမှာကျတော့ တစ်မျိုးရှင့်။ ပယ်ပယ်လိုနေ့မှာ အထီးကျန်နေတဲ့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကို အထီးကျန်ခြင်းမှ မြန်မြန် ကင်းဝေးအောင် လက်ဆောင် ပေးကြသတဲ့။ အပျိုကြီး မိစံ ... ဒီကနေ ကျွေးလိုက်ပြီနော်။
အခု ဆိုင်တွေတိုင်းမှာ ပယ်ပယ်လိုတွေကို promotion ခင်းနေကြပါပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်း ညီမလေးတွေက ပယ်ပယ်လိုတွေကို (ဓာတ်ပုံနဲ့) ကျွေးနေကြတော့ ကျွန်မလည်း ခေတ်မှီ အောင်ဆိုပြီး ပယ်ပယ်လို နှစ်ထုပ် ပြေးဝယ်လိုက်တယ်။ ပယ်ပယ်လိုနေ့ဆိုတော့၊ ဈေးကြီးမယ်ထင်တာ၊ မကြီးဘူးပဲ။ တစ်ထုပ်မှ ကိုးရာဝမ် တည်း။ ကျွေးမယ့်သူက ဟိုးအဝေးမှာဆိုတော့၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဝယ်စားမှရမှာလေ။ (ဘဝက အဲလို)
အတွဲလေးတွေက ပယ်ပယ်လိုအထုပ်လေးတွေ လက်မှာကိုင်လို့။ ကျွန်မကတော့ အဆောင်အောက်မှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ အတွဲတွေကိုထိုင်ငေး၊ တကျွတ်ကျွတ် ထိုင်ဝါးနေလိုက်တာ၊ တစ်ထုပ်မှာ ဘယ်နှစ်ခုပါလည်းတောင် သတိမထားမိလိုက်ဘူး။
စာဖတ်သူရော၊ ဒီနေ့ ပယ်ပယ်လို ဝယ်စားပြီးပြီလား?
၁၁ရက်၊ ၁၁လ၊ ၂၀၁၁ မှာကျရောက်တဲ့ ပယ်ပယ်လိုနေ့မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။
ပယ်ပယ်လိုနေ့ အကြောင်း ကို မမကျူတီ ပယ်ပယ်လိုပို့စ် မှာ အစုံအလင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:01 AM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရေမွှေး ဆွတ်လို့ ကုန်ခါနီး အကပ်အသတ်ပဲ ကျန်တော့ရင် ဆွတ်လို့မရတော့မယ့် အတူတူဆိုပြီး ပုလင်းလေးတွေကို လွှတ်မပစ်လိုက်နဲ့နော်။ အဖုံးလေးဖွင့်ပြီး ဒီတိုင်း အဝတ်ဗီရို ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါ။ အကျီင်္ ထုတ်ဝတ်ဖို့ ဗီရိုဖွင့်တဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရနံ့လေး ရနေမှာ။ ဝတ်လိုက်ရင်လည်း ဘယ်အချိန်နမ်းနမ်း အကျီင်္မှာ ရေမွှေးရနံ့လေးက သင်းလို့။
ဒီနည်းလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်၊ခြောက်နှစ်လောက်က သရဖူ မဂ္ဂဇင်းက လွတ်လပ်စိုး ရေးသားတဲ့ "အိမ်ရှင်မတို့ အားထားစရာ" ကဏ္ဌထဲကပါ။ တစ်ခါစမ်းကြည့်တာနဲ့ သဘောကျလို့ အခွံတစ်ခုရတိုင်း ထည့်ထားဖြစ်တယ်။
တော်ရုံ အနံ့ပြယ်ခဲတယ်။ စမ်းကြည့်နော်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:22 AM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ခန်းမတခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်။ " ဒေါက်.. ဒေါက်.. ဒေါက်.." တလှမ်းချင်းလျှောက်လာသော သူမကို လူအများက သမင်လည်ပြန် ငေးနေကြသည်။ စိတ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်ကို ကျေနပ်နေခိုက်...
"ဟဲ့ဟဲ့ .. အို"
ရုတ်တရက် ဒေါက်ချော်သွားသောသူမ ချော်မကျအောင် မနည်း ဆယ်လိုက်ရသည်။ ခုနကြည့်နေသော လူများပြုံးစိစိဖြစ်သွားကြသည်။ သည်ထက် ပိုဆိုးသည်က လူအုပ်ထဲမှာ သူမ တိတ်တခိုးစိတ်ဝင်စားမိနေသည့် ကောင်လေး ...
ဒီလိုဖြစ်ဖူးတာ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့နော်။ ခြေထောက်နောက် ဒေါက်မလိုက်တဲ့အခါ လမ်းလျှောက်ရင်"ဟတ်ကလပ် ဟတ်ကလပ်"နဲ့။ (ကျွန်မကြားတဲ့အသံ)
အရင်လ 22nd October က အာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက် လုပ်ပေးတဲ့ပွဲ သွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလို ဝတ်ရတာဆိုတော့ ဒေါက်လေးနဲ့မှကြည့်ကောင်းတာ။ သွားရမယ့်ခရီးကလည်းဝေး၊ စင်ပေါ်ရောက်မှ ဒေါက်ချော်ရင် အရှက်ကွဲရချေသေးရဲ့ တွေးမိတယ်။ မသွားခင်လေး အင်တာနက်ထဲ က ခြေဖဝါး ဖိနပ်ပေါ်မှာ နေရာတကျဖြစ်စေတဲ့ နည်းကောင်းလေးသွားတွေ့ပါတယ်။
ဖနောင့်ကို Hair Spray နဲ့ ဖြန်း၊ ၂မိနစ်လောက်စောင့် (အရမ်းကြာရင် ခြောက်ပြီးမကပ်တော့ပါ) ပြီးရင် စီးလိုက်ရုံပဲ။
အဆင်ပြေတယ်ရှင့်။။ စိတ်ချလက်ချသွားလို့ရတော့ စိတ်ချမ်းသာ။ :)
အခုတလောမှာ အားလပ်ချိန်သိပ်မရှိလို့စာအတိုလေးတွေပဲ ရေးနေပါဦးမယ်နော်။ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေရှင်။